Ozi niile anyị maara banyere BlackBerry Priv | Akụkọ akụrụngwa
Ihe a bụ ozi niile anyị ma gbasara BlackBerry Priv
Mgbe nnukwu asịrị gbasara mwepụta nke Blackberry na sistemụ arụmọrụ gam akporo, n'izu a Jhon Chen, onye isi ụlọ ọrụ Canada kwadoro mwepụta nke ama a na-egosi ya na aka ya, na vidiyo nke gbasaa dị ka oke ọkụ site na netwọkụ nke netwọkụ na ị ga - ahụ n'isi nke isiokwu a.
La BlackBerry PrivNke ahụ bụ otu esi akpọ ekwentị mkpanaka a, mgbe anyị matachara ya ogologo oge dị ka BlackBerry Venice, ọ na-ewelite atụmanya dị ukwuu na ọ bụ na ahụigodo ahụ nke BlackBerry na nchekwa na nzuzo ha na-enye na ọdụ ha ka na-akpọ uche nke ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ndị ọrụ.
O bu ihe nwute ma n’oge a anyi kwesiri ima otutu ihe omuma banyere ngwa a, ma taa anyi ekpebiela ichikota ihe nile anyi mara na mbu n’isiokwu a, nke anyi n’enwe olile anya na ichoro ma karie ya.
Tupu ịmalite nyocha a nke ihe niile anyị ma na BlackBerry Priv, cheta na ugbu a ọ dịghị ụbọchị a maara maka ngosipụta gọọmentị nke ngwaọrụ a na ịmalite ahịa, ọ bụ ezie na Jhon Chen n'onwe ya ekwenyela na ọ ga-adị n'ụwa niile tupu njedebe nke afọ. Anyị amaghịkwa ọnụahịa ahụ, ọ bụ ezie na anyị echeworị na anyị agaghị eche ihu na ama ama akụ na ụba.
1 Atụmatụ na nkọwa nke BlackBerry Priv
3 Ihuenyo, na-agbaso ụzọ nke ndị nrụpụta ndị ọzọ
5 Ọnụahịa na mwepụta nke BlackBerry Priv
6 Nyocha ikpeazụ na echiche
Atụmatụ na nkọwa nke BlackBerry Priv
Ọzọ anyị ga-enyocha isi atụmatụ na nkọwapụta nke anyị maraworị maka BackBerry Priv. Otutu n’ime ha ekwenyela n’aka ndi oru Canada n’otu uzo ma obu ozo, n’agbanyeghi na anyi nwere ike ikwu na ha bu ndi isi, anyi aghaghi ichere ka BlackBerry kwuputa ha.
Ngosipụta: 5,4 sentimita asatọ na mkpebi nke 2560 x 1440 pikselụ
Ncheta RAM: 3 GB
Nchekwa dị n'ime: 32 GB gbasaa site na kaadị microSD
Igwefoto: 18 megapixel azụ na 5 megapixel n'ihu
Batrị: 3.850 mAh
Sistemụ nrụọrụ: Android 5.0 Lollipop
Ndị a bụ njirimara ndị bụ isi na nkọwapụta nke anyị maara n'oge ahụ na ọ bụ ezie na anyị ka kwesịrị ịma ụfọdụ isi dị ka ndị metụtara njikọta ma ọ bụ ibu ya, mana enweghị obi abụọ anyị ga-eche ihu ọdụ anyị nwere ike itinye n'ime ya - akpọrọ ahịa ekwentị ekwentị dị elu.
Otu n'ime ike nke BlackBerry Priv ga-doro anya na-imewe na bụ na ya curved ihuenyo, ya eji keyboard na n'ozuzu a kpachapụ anya imewe ga-abu njirimara nke ngwụcha a, nke ga - eme ka ọ pụọ iche n’ahịa.
Dabere na ihe a hụrụ na vidiyo ebe Jhon Chen na-egosi anyị ọnụ ya na onyonyo gọọmentị nke ụlọ ọrụ Canada bipụtara n'oge awa gara aga, anyị nwere ike ịchọta na ọ ga-abụ ekwentị pụrụ iche pụrụ iche nke ejiri ihe dị oke ọnụ. N'ezie, na otu ugboro, agba nke BlackBerry Priv ga-abụ njirimara ojii nke BlackBerry.
Na onyonyo gọọmentị abụọ a, bụ naanị ndị BlackBerry bipụtara, anyị enweghị ike ịhụ azụ nke ọnụ ebe a ga-etinye igwefoto nwere flash abụọ. Akụkụ azụ a dị ka ọ ga-abụ nke ihe yiri carbon carbon ma ọ bụ Kevlar.
Na akụkụ nke elu nke ngwaọrụ anyị na-enweghị ike ịhụ na onyonyo ndị a ga-abụ oghere iji tinye kaadi SIM yana kwa ọzọ oghere iji tinye microSD kaadị, nke ga-abụ obi abụọ na ị ga-enwe ike ịgbasa ohere nchekwa nke ọdụ ahụ n'ụzọ dị mfe ma dịkwa oke ọnụ ala.
Ihuenyo, na-agbaso ụzọ nke ndị nrụpụta ndị ọzọ
Ihuenyo ga-abụ ihe ọzọ dị ike nke BlackBerry Priv na ọ bụ ya na ụfọdụ akụkụ nke 5,4 sentimita asatọ, ọ ga-anwa i toomi ma ọ bụ karịa gafere nke etinyere na Samsung Galaxy S6 ihu. Dị ka ngwụcha ngwụcha nke ụlọ ọrụ South Korea, a ga-atụgharị ya n'akụkụ ya, agbanyeghị na anyị amaghị maka oge a ma ha ga-arụ ọrụ ọ bụla maọbụ ga-abụ "ịchọ mma.
Iji lelee ogo nke ihuenyo ahụ, anyị na-atụ egwu na anyị ga-echere maka BlackBerry ọhụrụ a iji ruo ahịa ma anyị nwere ike nyochaa ya ma pinye ya n'aka anyị.
N'oge a anyị amaghị ozi ọ bụla gbasara igwefoto nke BlackBerry ọhụrụ a, ọ bụ ezie na dịka asịrị niile ha ga-adị n'ọkwa nke ngwaọrụ kacha mma na ahịa.
Dị ka anyị mụtara, n'azụ igwefoto ga-a Anya 18 megapixel ya na ihe onyonyo, OIS.
Banyere igwefoto azụ nwere obi abụọ ọzọ, ọ bụ ezie na ihe niile na-egosi na ọ ga-ebunye oghere 5 megapixel.
Banyere igwefoto, naanị ihe anyị nwere ike ikwu bụ na anyị nwere olile anya na ha ruru ọfụma na ọ bụghị nke ogo dị ka nke Blackberry Z10 ma ọ bụ BlackBerry Q10, nke hapụrụ ọtụtụ ihe a ga-achọ.
Ọnụahịa na mwepụta nke BlackBerry Priv
Dịka anyị gwara gị tupu oge a Blackberry ekwenyeghi ụbọchị gọọmentị maka ịmalite ahịa nke BlackBerry ọhụrụ a, ọ bụ ezie na ha ekwenyela na ọ ga-adị n’ụwa niile tupu ngwụcha afọ a. O di nwute, anyi amaghi ma ha gha eme ihe omume iji mee BlackBerry Priv official ma oburu na odi onye oru mgbe obere ihe ngosi nke Jhon Chen mere.
Pricegwọ nke smartphone ọhụrụ a bụ ihe ọzọ dị ukwuu na-amaghị na ọ bụ na ọtụtụ asịrị na-egosi na Ọ gaghị abụ ngwaọrụ mkpanaka dị ọnụ ala ma ọ ga-adị elu karịa 600 euro. Agbanyeghị, ụfọdụ ndị ọkachamara gosipụtara na ọ nwere ike ịnwe ọnụahịa n'okpuru ihe mgbochi ndị ahụ nke euro 600 iji bụrụ nhọrọ karịrị ihe na-atọ ụtọ maka ọtụtụ ndị ọrụ.
N'oge na-adịghị anya, anyị ga-ewepụ obi abụọ ma anyị na-atụ ụjọ na n'oge na-adịghị anya BlackBerry ga-eme onye ọrụ BlackBerry Priv ọhụrụ, yana mgbakwunye na ikpughe isi nkọwa ya, ọ ga-egosikwa ọnụahịa ya.
Nyocha ikpeazụ na echiche
BlackBerry ọhụrụ a na-ewelite atụmanya dị ukwuu yana nkwa imewe ya. O doro anya na nkọwa ndị ahụ dị ka ọ dị na njedebe nke ngwaọrụ dị elu. Firmlọ ọrụ ndị Canada na-ebupụta ọdụ na ahịa ogologo oge, dị anya site na njedebe dị elu yana kwa n'etiti etiti.
Na mgbakwunye, sistemụ arụmọrụ nke BlackBerry ọhụrụ a, nke ga-abụ gam akporo 5.0, bụ ịrụ ụka adịghị ya na nnukwu nzọ sitere na ụlọ ọrụ Jhon Chen na-eduzi na ịbịakwute mkpa nke ọtụtụ ndị ọrụ.
Anyị amaghị ọnụ ahịa nke ama ọhụụ ọhụrụ a ga - akụ n'ahịa, mana enwere m olile anya na ọnụahịa ya anaghị arị elu ma gafere euro 600 ma ọ bụ 700, n'ihi na ọ bụrụ na ọ nwere ọnụahịa mara mma, echere m na n'enweghị obi abụọ ọ ga - abụ otu n'ime kacha mma-ere mobile ngwaọrụ site na ike nke 2015 na n'afọ ọzọ.
Kedu ihe ị chere maka BlackBerry ọhụrụ a na ego ị chere na ọ nwere ike ịnwe?. You nwere ike inye anyị echiche gị na oghere edebere maka ikwu na post a ma ọ bụ site na netwọkụ mmekọrịta anyị nọ ugbu a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Telephony » Mobiles » Ihe a bụ ozi niile anyị ma gbasara BlackBerry Priv
Kedu usoro iwu ESA na-agbaso iji kpọtụrụ ya nyocha kachasị anya?
Egwuregwu vidiyo wepụtara maka Ọktọba 2015